Sirdoonka Turkiga: Dilka iyo jarjarka Jamaal Khashoggi waxaan u haynaa caddaymo laga helay bullaacadaha iyo waliba muuqaal – Radio Daljir
Oktoobar 11, 2018 3:52 g 0
Waxaa isa soo taraya wararka ku saabsan in Jamaal Khashoggi si xun loogu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul, laguna dilay amar uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan.
Wararka laga helayo sirdoonka Turkiga ayaa sheegaya in 15 sarkaal oo kamid ah ilaalada gaarka ah ee Boqortooyada Sucuudiga iyo dhakhtar ku takhasusay raad-reebka danbiyada ay fuliyeen amarka Amiirka.
Wararka Jamaal Khashoggi waxaa ugu horreeya in sidii uu duhurkii maalin Talaado, 2 Aktoobar Jamaal uu u galay qunsuliyadda Sucuudiga uusan weli ka soo bixin. Laba saac kabacdi markii uu Jamaal qunsuliyadda galay waxaa qunsuliyadda ka baxay gawaari wada muraayado madoow oo galay deegaanka qunsuliyadda oo 500 tallaabo u jirta isla qunsuliyadda.
Waxaa kale oo xusid mudan arrinkana hadda cirka ku sii shareeray in isla maalinkaas uu Jamaal waraaqaha ka doonanayo qunsuliyadda aysan shaqaaleba joogin oo qadadii kabcdi ku dhawaad 12:45 PM dhammaan shaqaalihii qunsuliyadda oo ahaa 28 shaqaale ah la wada fasaxay. Fasaxa ayaa lagu macneeyey ayada oo qadada kabacdi qunsuliyadda lagu qabanayo shir dibloomaasi oo albaabadu u xiranyihiin. Jamaal Khashoggi waxa uu qunsuliyadda soo galay 1.14 PM si loogu fududeeyo waraaqo ku saabsan nikaax cusub iyo furid xaas hore. Jamaal dib danbe ugama soo bixin qunsuliyadda.
15ka sarkaal ee Sucuudiga ee lagu tuhmayo dilka ayaa badankoodu isla caweysinkii 2 Aktoobar waxa ay ku kala noqdeen laba diyaaradood oo gooni ah oo ay ku kala yimaadeen. 7 PM caweysnimo diyaarad ay saaranyihiin 6 sarkaal waxa ay u duushay Qaahira, ayada oo uga sii duushay Riyaadh. 11 PM diyaarad kale oo ay saaranyihiin 7 sarkaal ayana waxa ay u duushay Dubai, subixiina waxa ay u sii duushay Riyaadh.
Dhammaan wararka kore ma ay muujinayaan wax caddayn ah iyo in Jamaal Khashoggi lagu dhexdilay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbuul, laakiin waxa ay sii xoojinayaan tuhunka la qabo oo ah in Jamaal uusan bed qabin.
Isla saaka warar hordhac oo ay firdhiyeen sirdoonka Turkiga ayaa muujiyey in ah hayaan caddaymo ku filan, muujinaya in Jamaal Khashoggi qunsuliyadda lagu dhex dilay, oo waliba si xun loo dilay, deedna la jarjaray. “Waxaan bullacadaha ka soo dareera qunsuliyadda Sacuudiga ka soo leexinay caddaymo la xiriira dilka Jamaal Khashoggi,” ayaa kamid ah wararka laga helo sirdoonka. Waxa kale oo ay firdhiyeen warar ay kamidyihiin in ay hayaan maqal iyo muuqaal ku saabsan sidii Jamaal loo dilay.
Sarkaal Turki ah oo ka agdhow baaritaanka ay warbaahinta u sheegay in ay oqyihiin in Jamaal la dilay, qolka lagu dilay, markii la dilay, qolka kale ee loo qaaday oo deedna lagu jarjaray. Waxa uu sheegay in dhammaan waxa dhacay ay ogyihiin. Markii na loo oggolaado in aan qunsuliyadda galno waa naqaan meelaha aan si toos ah u abbaarayno.
Sarkaalka ayaa ku daray in markii Jamaal uu soo galay qunsuliyadda la geeyey qolka soodhaweynta, deedna laba nin ay ka jiideen qolkaas, ayna ku dileen qol kale. Markii la dilay kabacdina lagu jarjaray qol kale. Waxaa kale oo uu sarkaalku intaas ku daray in dhawaaqa iyo qaylodhaanta Jamaal ka soo yeeraytay waqtigaas ay markhaatiyo u hayaan.
Jamaal oo xirnaa saacadda ‘Apple Watch’ kuna xirnaa taleefoonkiisa iPhone ee uu uga soo tagay xaaskiisa oo bannaanka ku sugaysay ayaa sirdoonka Turkigu sheegeen in ay ka heleen macluumaad badan oo la xiriira sida loo dilay Jamaal.
Qunsulka Sucuudiga oo asna aad loo baadi goobayo ayaan illaa iyo Talaadadii ka soo bixin deegaankiisa qunsuliyadda oo lagu tuhmayo in beerta deegaanka lagu duugay lafihii Jamaal Khashoggi. Sacuudiga ayaa illaa iyo hadda diidan in wax baaritaan ah laga dhex sameeyo qunsuliyadda ama guriga qunsulka.
Halkan Kadaawo Warbixin Faahfaahsan
Daljir kala soco wararka baadigoobka Jamaal Khashaggi, geeri iyo nololba.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19753